कुष्ठरोग के हो र किन हुन्छ बिभेद? #Leprosy • Health News Nepal
कुष्ठरोग के हो र किन हुन्छ बिभेद? #Leprosy
सबैभन्दा बढी कुष्ठरोगको चाप तराईका जिल्लामा धेरै छ।
राज कुमार पौडेल
हरेक बर्ष जनवरी अन्तिम आईतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने गरीन्छ । यो बर्ष पनि ६९औं विश्व कुष्ठरोग दिवस “शून्य कुष्ठरोगको लागि हाम्रो प्रतिवद्धता, आत्मसम्मानको लागि ऐक्यवद्धता।” भन्ने मुल नाराका साथ २०७८/१०/१६ (30th January 2022) का दिन विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाएको छ ।
कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइकोव्याक्टेरियम लेप्रे नामको सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने सरुवा रोग हो । यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । उपचार नगरेको कुष्ठरोग विरामीसंग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई मुख्यतः श्वास प्रश्वासको माध्यामबाट यो रोग सर्न सक्छ तर शुरूकै अवस्थामा रोगको निदान र उपचार गरेमा यो रोग अरूलाई सर्दैन ।
यो रोग बहुऔषधीको एक मात्रा सेवनबाट नै ९९ प्रतिशत रोगका किटाणुलाई शिथिल बनाई रोग अरूलाई नसर्ने हुन्छ । समयमा नै उपचार गरेमा कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ र अपांगता हुदैंन । तसर्थ, कुष्ठरोग पनि अरू रोग जस्तै साधारण सरूवा रोग हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
कुष्ठरोग मुक्त नेपालको ‌‌सहित पालिका स्तरबाटै कुष्ठरोगको संक्रमण रोक्ने लक्ष्यमा नेपाल सरकारले लिएको छ । नेपाल सरकार शून्य कुष्ठ रोगको लागि राष्ट्रिय मार्ग चित्र (२०२१-२०३०) पुरा गर्नको लागि अगाडि बढेको छ।
त्यसका लगि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूको लागि क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिन जरुरी देखिनुका साथै सही र छिटो निदान, पुर्न उपचार र जटिलता बिरामीको रेफरल ब्यबस्थापन साथै कुष्ठरोग सम्वन्धि औषधी/ सामाग्रीको प्रभावकारी आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरि देखिन्छ । सबै तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, वकालत तथा कुष्ठरोगको कार्यक्रममा बजेटको अभिबृद्धी अझै आवश्यक छ । नयाँ बिरामी भटिएमा बिरामीको परिवार र समुदायमा सम्पर्क परिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
वर्तमान स्वास्थ्यका सुचकमा कुष्ठरोगको अवस्था हेर्ने हो भने यो वर्ष नयाँ विरामीको संख्या २१ सय ७३ छ । जसमध्ये महिला बिरामीको संख्या ७ सय ९६ र १४ वर्षमुनि उमेर समुहमा पनि यो रोगको संख्या १ सय १ रहेको छ । यसैगरि सबैभन्दा बढी कुष्ठरोगको चाप तराईका जिल्लामा धेरै छ, त्यसमा पनि मदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा बढि रहेको देखिन्छ ।
अहिलेका विद्यमान चुनौतीहरु नियाल्दा कुष्ठरोगका विरामी तथा प्रभावितहरु प्रति गरिने सामाजिक भेदभाव, नेपाल समाजमा कुष्ठरोग प्रतिको अन्धबिश्वास नै मुख्य चुनौती हो। यसलाई झन बढवा दिन नेपालको विद्यमान कानुन, सामाजिक अन्धविश्वास बादक बन्दै आएको छ । अहिले पनि कानुनको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ पारिवारीक कानून परिच्छेद-१, विवाह सम्वन्धि व्यवस्था महल ७१, कुष्ठरोग भएका व्यक्तिसंग विवाह गर्न गराउन नहुने भनि प्रावधान‌ राखिएको छ ।
यो कानुन नै सामाजिक भेदभाव बढाउने मुख्य जड हो । समुदायमा कुष्ठरोग र कुष्ठ प्रभाबित प्रति गरिने भेदभाव गर्नको लागि रोग बारेमा सत्य तथ्य जानकारी दिनु नितान्त जरुरी छ, साथै कुष्ठरोग प्रतिको भ्रम र डरलाई हटाउन परिवार र समुदायमा रोगको बारेमा सही जानकारी दिने तथा समुदायमा रोगको बारेमा थप प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले, कुष्ठरोग लागेकै आधारमा कुष्ठरोगका विरामी र प्रभावितलाई सामाजिक भेदभाव नगरौं ।
(लेखक: पौडेल दि लेप्रोसी मिसन नेपालमा तालीम प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुनुन्छ। )
Tags: Aandwan hospital LeLeCorona Virus #Covid19Leprosy mission nepalRaj Kumar paudel
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपेक्षित रोग सम्बन्धि दिवस
जनस्वास्थ्य संघ सुदुरपश्चिम प्रदेशको नयाँ कार्यसमिति चयन